1. Contrast LCD ဖန်သားပြင်များထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသော Control IC、 စစ်ထုတ်မှုနှင့် orientation film များကဲ့သို့သောဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ ၎င်းသည် panel ၏ခြားနားမှုနှင့်ဆက်စပ်သည်။ ယေဘုယျအသုံးပြုသူများအတွက် ၃၅၀: ၁ ၏ဆန့်ကျင်မှုအချိုးအစားသည်လုံလောက်သည်၊ သို့သော်ဆန့်ကျင်ဘက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လယ်ပြင်တွင်အသုံးပြုသူများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ C ...
အဘယ်ကြောင့် OLED သည် LCD ထက်ပိုမိုကျန်းမာသည်။
အပြာရောင်အလင်းနည်းသော OLED အရောင်ပြသမှုသည်လူတို့၏မျက်လုံးများအတွက်ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာရှိစေပြီးအခြားအချက်များကြောင့် OLED ကို LCD ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ ဘူတာ B သို့မကြာခဏသွားလေ့ရှိသောသူငယ်ချင်းများသည် Barrage Eye Protection! တကယ်တော့ငါမျက်လုံးကာကွယ်ရေး Buff ကိုကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ထည့်ချင်တယ်၊ မင်းမှာမိုဘိုင်းဖုန်းဒါမှမဟုတ်တီဗီတစ်ခုပဲလိုတယ်။
ထိတွေ့မျက်နှာပြင်စက်ရုံ Nissha နေ့စဉ်ကန့်သတ်ချက် ကပ်ရောဂါ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာအကန့်အသတ်ရှိသဖြင့် H1 ၏ ၀ င်ငွေခန့်မှန်းချက်မြင့်တက်လာလိမ့်မည်
အသစ်သော coronavirus pneumonia (coronary pneumonia အသစ်ဟုလူသိများသည့် COVID-19) ကူးစက်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာအကန့်အသတ်ရှိသည်။ ကြီးမားသော touch panel ထုတ်လုပ်သည့် Nissha သည်လွန်ခဲ့သောသုံးလပတ်မှအရှုံးမှအမြတ်အစွန်းသို့အမြတ်အစွန်းသို့အောင်မြင်စွာပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ယခုနှစ် H1 ဘဏ္reportာရေးအစီရင်ခံစာအတွက်ခန့်မှန်းချက်ကိုမြှင့်တင်ပါ။
မျက်နှာပြင်၏အခြားဘက်ခြမ်းကိုမြင်နိုင်သည့်အဆက်အသွယ်မရှိသောပွင့်လင်းမြင်သာသော touch screen ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ သင့်လက်ချောင်းကိုလှုပ်ခါလိုက်ပါ။ မျက်နှာပြင်ကိုလည်ပတ်ရန်မလိုပါ။ သရဖူကပ်ရောဂါသစ်ပျံ့နှံ့မှုနှင့်အတူဆန့်ကျင်ဖက်တွင်ပါဝင်သည်။ - စတိုးဆိုင်များတွင်ငွေရှင်းကောင်တာများ၌တပ်ဆင်ထားသော - ငွေပမာဏခွဲခြင်း ....
Low-Poly-silicon (LTPS) သည်မူလကဂျပန်နိုင်ငံမြောက်အမေရိကတွင်နည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး Note-PC ဖန်သားပြင်၏စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချခဲ့သည်။ Note Note-PC ကိုပိုမိုပါးလွှာ။ ပိုမိုပေါ့ပါးအောင်ပြုလုပ်ရန်တီထွင်ထားသောနည်းပညာ။ ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်အလယ်လောက်တွင်ဤနည်းပညာ ရုံးတင်စစ်ဆေးအဆင့်သို့စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
ဒီဖန်သားပြင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘ ၀ တွင်အလွန်အသုံးများပြီးအရေးကြီးသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ မျက်နှာပြင်မှသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုပြသသောမျက်နှာပြင်မှပြသသည်၊ ၎င်းမှသတင်းအချက်အလက်များစွာရရှိသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများနှင့်နည်းပညာအရ CRT သို့ခွဲခြားနိုင်သည် display、 Plasma display.Led display ...
LCD Regulation A နှင့် B တို့ကိုမည်သို့ခွဲခြားသနည်း။
LCD panel ၏အရည်အသွေးအရ၎င်းကို A, B နှင့် C ဟူ၍ အဆင့်သုံးဆင့်ခွဲခြားနိုင်သည်။ the ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း၏အခြေခံသည်သေဆုံးသောအရေအတွက်အရေအတွက်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ကမ္ဘာပေါ်တွင်သက်ဆိုင်ရာခက်ခဲ။ မြန်ဆန်သောစည်းမျဉ်းများမရှိပါ။ ထို့ကြောင့်နိုင်ငံအသီးသီး၏အဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ချက်များသည်မတူညီပါ။ ငါတို့ ...
ကောင်းသောအစိတ်အပိုင်းများကိုရှာဖွေခြင်းအရေးကြီးလှသည်။ ပထမ ဦး စွာသင်အစိတ်အပိုင်းများကိုအဓိကအမျိုးအစားနှစ်မျိုးဖြစ်သော passive နှင့် active ဟူ၍ ခွဲခြားသည်ကိုသင်သိရန်လိုအပ်သည်။ Passive Components: resistors, capacitors၊ inductance Electronic အစိတ်အပိုင်းများသည်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုတက်ကြွစွာသို့မဟုတ် passive အဖြစ်ခွဲခြားသည်။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင် ...
Surface Mount Technology, SMT နှင့်၎င်းနှင့်ဆက်စပ်သောမျက်နှာပြင်ချိတ်ဆက်ကိရိယာများ၊ SMD များသည်အစိတ်အပိုင်းများကိုဘုတ်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသဖြင့် PCB တပ်ဆင်မှုကိုသိသိသာသာမြန်စေသည်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာစီးပွားဖြစ်လုပ်ထားတဲ့အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းကိရိယာတွေထဲကတစ်ခုခုကိုကြည့်ပြီးဒီဟာကသေးငယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်။ အစဉ်အလာကိုသုံးမည့်အစား ...
Display Supply Chain အတိုင်ပင်ခံ DSCC recently မကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ခဲ့သောအစီရင်ခံစာတစ်ခုအရ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၏တတိယသုံးလပတ်တွင် panel ၏စက်မှုလုပ်ငန်းရောင်းအားသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်စတုတ္ထသုံးလပတ်တွင်အမြင့်ဆုံးအဆင့်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ 30 ဒေါ်လာ ၃၀.၅ ဘီလီယံအတွက်ယခင် ၂၁% တိုးတက်မှု တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်တိုးတက်မှု ၁၁% ရှိခဲ့ ...
မျက်နှာပြင်အောက်၌လက်ဗွေအသိအမှတ်ပြုခြင်းထိုးဖောက်မှုနှုန်းတိုးလာသည်။ စိန်ခေါ်မှု ၃၀%၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်အေဂျင်စီ၏ခန့်မှန်းချက်များရှိသည်။ ဖန်သားပြင်အောက်ရှိလက်ဗွေအသိအမှတ်ပြုမှုနည်းပညာကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သည်။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောနည်းပညာများကိုပိုမိုထုတ်လုပ်ရန်မျှော်လင့်ရသည်။ ..
စျေးကွက်သုတေသနအေဂျင်စီ Omdia ကနောက်ဆုံးပေါ်သတင်းအချက်အလက်များကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် LCD TV panel တင်ပို့မှုသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ၂၅၆ သန်းရှိလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။ တစ်နှစ်လျှင် ၆ ရာခိုင်နှုန်းရှိသော်လည်းထိပ်တန်းတီဗီအမှတ်တံဆိပ် ၁၀ ခု၏ ၀ ယ်ယူမှုပမာဏသည် ၈၆% အထိသိသိသာသာတိုးတက်ခဲ့သည်။ ， လာမည့်နှစ်တွင်၎င်းသည် TV panel အရင်းအမြစ်များအတွက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနိုင်သည်။